फुटसल लिगको प्ले अफमा शंखमुल – Khel Dainik
फुटसल लिगको प्ले अफमा शंखमुल
पोखरा (खेलदैनिक) । शंखमुल फुटसल राष्ट्रिय ए डिभिजन फुटसल लिगको प्ले अफमा पुग्ने स्पोर्टस क्यासल पछि दोस्रो टोली बनेको छ । आइतबार सम्पन्न खेलमा झरना स्पोर्टस क्लबलाई ७–० को फराकिलो अन्तरले हराएपछि शंखमुल प्ले अफमा पुगेको हो ।
पोखरा रंगशाला स्थित बहुउद्देश्यीय कभर्डहलमा सम्पन्न खेलमा शंखमुलका लागि जेनिश प्रजापतिले ह्याट्रिक गरे । त्यस्तै अरुज सिंह, कृजल खड्का, योगेश श्रेष्ठ र सबिन खड्काले एक–एक गोल गरे । खेलमा जेनिस प्रजापति म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।
यो जितपछि ८ खेलबाट १८ अंक जोडेको शंखमुल दोस्रो स्थानमा छ र शिर्ष स्थानको स्पोर्टस क्यासल भन्दा ४ अंकले पछाडी छ । उता लगातार आठौं हार बेहोरेको झरना अंकविहीन छ र आगामी सिजनका लागि रेलिगेशनमा परेको छ ।
त्यस्तै आइतबार नै भएको अर्को खेलमा सबिन मेमोरियल एफसीले प्रभातफेरी युथ क्लबलाई ८–४ ले हरायो । सबिन मेमोरियलका लागि अविनाश तामाङले दोहोरो ह्याट्रिकसहित ६ गोल गरे भने मनोज गुरुङले थप दुई गोल गरे । पराजित प्रभातफेरीका लागि डोना थापाले २ गोल गरे भने अखिलेश कार्की र नबिन लामाले एक–एक गोल गरे ।
खेलमा सबिन मेमोरियलका अविनाश तामाङ म्यान अफ द म्याच घोषित भए । यो जितसँगै ८ खेलबाट १३ अंक जोडेको सबिन मेमोरियलको प्ले अफमा पुग्ने सम्भावना अझै कायम छ । उता पराजित प्रभातफेरीको ७ अंक छ र प्ले अफमा पुग्ने अवसरबाट बाहिरिएको छ ।
त्यसैगरी आइतबार नै भएको अर्को खेलमा ढुकु फुटसल हवले मच्छिन्द्र स्काई गोल्समाथि ७–५ को जित निकाल्यो । ढुकुका लागि बिक्रान्त नरसिंह राणा एक्लैले ४ गोल गरे भने अमित लामा, उर्केन शेर्पा र प्रसिद्ध मगरले एक–एक गोल गरे । पराजित स्काई गोल्सका लागि अमित तामाङले दुई गोल गर्दा मनोज राई, आशिष सुमन र सन्जोग चाम्लिङले एक–एक गोलको योगदान दिए ।
खेलको म्यान अफ द म्याच बिक्रान्त नरसिंह राणा घोषित भए । आठौं चरणको खेलहरु समाप्ती हुँदासम्म समान १०–१० अंक जोडेका स्काई गोल्स र ढुकु फुटसल पनि प्ले अफमा पुग्नबाट असफल भएका छन् ।
← सबिन मेमोरियलका अविनाशको वर्चश्व जे.एस.वाई.सी. चतरा नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि →
नेपाली टिमबाट बाहिरिए सोमपाल र बिनोद आश्विन १७, २०७८
२०औं आहा! रारा गोल्डकपमा एपिएफको विजयी शुरुवात आश्विन १७, २०७८
हारेर पनि माजिया प्रेसिडेन्ट कपको फाइनलमा आश्विन १७, २०७८
सहारा एकेडेमीलाई लुम्बिनी विकास बैंकको आर्थिक सहयोग आश्विन १७, २०७८
मधेस प्रदेशको जित आश्विन १७, २०७८
रुपन्देहीमा रेफ्री प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न आश्विन १७, २०७८